Fomba fanao tsara indrindra hanamafisana ny mailaka amin'ireo mpanentana | Martech Zone
Fomba fanao tsara indrindra hanamafisana ny mailaka amin'ireo mpanafika
Alahady, Desambra 13, 2015 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Koa satria apetraky ny matihanina amin'ny fifandraisana amin'ny besinimaro isan'andro izahay dia mahita ny toerana tsara indrindra sy ratsy indrindra amin'ny fizarana mailaka. Nozarainay teo aloha ny fomba fanoratana pitch mahomby ary ity infografika ity dia fanaraha-maso lehibe izay mandrakotra ny fandrosoana lehibe kokoa.
Ny zava-misy dia mila manangana fahatsiarovan-tena sy fahefana amin'ny marika amin'ny Internet ireo orinasa. Tsy ampy intsony ny fanoratana atiny, ny fahaizana mametraka atiny lehibe sy fizarana azy dia tena zava-dehibe amin'ny paikady marketing atiny rehetra. Azonao atao ihany koa ny mandoa ny fampiroboroboana, saingy tsy hiteraka fika voajanahary izay jeren'ny motera fikarohana.
Ivotoerana marketing eo amin'ny sehatra ivelany manodidina ny famoronana sy fikolokoloana fifandraisana mitohy amin'ny alàlan'ny fitondrana antoko hafa ao amin'ny marikao. Na dia misy aza ny fiakaran'ny haino aman-jery sosialy tato ho ato sy ny fidirana an-tserasera, ny mailaka dia mijanona ho iray amin'ireo fomba mahery vaika hampiasana antoko ho an'ny marika (raha vita tsara izany!).
Dingana amin'ny famolavolana ny fizotran'ny mailaka
Farito ny tanjona iray - ny tanjona dia mety ahitana fananganana fahatsiarovan-tena amin'ny marika, fanaovana varotra, famporisihana fizarana atiny (toy ny infographic), fandrefesana, fampandraisana anjara ny vondrom-piarahamonina, na fanaovana fampidirana.
Fantaro ireo mpihaino kendrena - mikendry bilaogera, tompona tranokala, mpanao gazety, mpandray anjara amin'ny famoahana boky, akademia, governemanta, na tsy mitady vola ve ianao?
Proofread, fitsapana, famerenana - Ataovy azo antoka ny fiasan'ny rohy, ampiasao ny tsipelina, fanamarinana ny fitsipi-pitenenana mety, ary manorata fetsy fohy sy mahasarika.
izany infographic avy amin'ny tatitra momba ny fampianarana an-tserasera mamakivaky stat rehetra voaangona amin'ny mailaka fanentanana, inona no mandeha, tsy mandeha ary inona no hialana tanteraka. Tafiditra ao anatin'izany ny ora andro, andro amin'ny herinandro, tsipika lohahevitra, teny hampiasaina, isan'ny fanandramana, haben'ny hafatra, sns. Stat iray mahaliana nozaraina tamin'ity infographic ity dia bilaogera lehibe iray 1 no manana ny fiatraikany mitovy amin'ireo bilaogera kely 6.
Tags: ny mpitoraka bilaogyandro amin'ny herinandrofanandramana mailakamailaka Marketingmailakafanentanana mailakafanitsiana ny mailakafitsapana mailakafanentanana ny mpanao gazetyisan'ny andranatatitra momba ny fampianarana an-tseraserafanentananafampiharana tsara indrindrahaben'ny hafatra mailakaandalana foto-kevitraora amin'ny andro
Fanamby sy tombontsoa azo avy amin'ny fizarana marketing